Faa'iidada Uu Bukayo Saka Ka Helay Cunsuriyaddii Iyo Rikoodhihii Uu Ka Khasaariyey England Oo La Shaaciyey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFaa’iidada Uu Bukayo Saka Ka Helay Cunsuriyaddii Iyo Rikoodhihii Uu Ka Khasaariyey England Oo La Shaaciyey
Faa’iidada Uu Bukayo Saka Ka Helay Cunsuriyaddii Iyo Rikoodhihii Uu Ka Khasaariyey England Oo La Shaaciyey
July 15, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Xiddiga da’da ee Bukayo Saka ayaa faa’iido badan ka helay rikoodhihii uu ka khasaariyey xulka England ciyaartii finalka ee Euro 2020 iyo cunsuriyaddii u xigtay ee lagula kacay maalmihii u ka dambeeyey.
Bukayo Saka, Jadon Sancho iyo Marcus Rashford ayaa labadii maalmood ee Isniintii iyo Salaasadii waxa ay heleen illaa 2000 farriimood oo cunsuriyad iyo aflagaaddo ah oo loogu soo gudbiyey baraha bulshada, laakiin taasi dhinac kale ayay faa’iido uga noqotay laacibkan da’da yar.
19 jirkan ayaa loo dhiibay rikoodhihii shanaad ee Ingiriiska, waxaana ka badbaadiyey Gianluigi Donnarumma, taasina waxay keentay in su’aal la iska weydiiyo sababtii uu tababare Southgate ugu doortay da’yarkan in uu qaato rikoodhaha go’aaminaya ciyaarta.
Intii ay dadka qaarkood aflagaaddada iyo cayda ku wadeen Bukayo Saka, waxa jiray dad kale oo iyaguna garabkiisa istaagay, kuwaas oo xataa u yeelanaya faa’iido dhaqaale oo uu heli doono mustaqbalka.
Saddexdii maalmood ee Isniintii, Salaasadii iyo Arbacadii waxa si layaableh u kordhay dadka ku xidhmay barta bulshada Bukayo Saka ee Instagram, waxaana saddexdaas maalmood tirada dadka kusoo biiray ay tahay 1.4 milyan oo qof.
Ka hor intii aanu tartanka Euro bilaabmin, dadka ku xidhan Instagram-ka Saka ayay tiradoodu ahayd 700,000 qof, laakiin waxay hadda gaadheen 2.1 milyan oo qof oo intooda ugu badan ay yimaaddeen saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey.
Dadka kusoo xidhmay ayay intooda badan ugu yimaaddeen qaab hiilin oo kale ah maadaama la cunsuriyeeyey xilli da’diisu yar tahay oo uu waliba bandhig fiican sameeyey.
Bukayo Saka ayaa hadda lacag badan ka heli doona shirkadda FACEBOOK ee iska leh Instagram, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay tirada dadka ku xidhmayaa sii kordhaan.